Malunga Nathi-Shandong Yunlong Eco Technologies Co., Ltd.
I-Shandong Yunlong Eco Technologies Co., Ltd. inikezelwe ekuyileni nasekuveliseni iimoto zombane zamandla amatsha ngokuhambelana ne-Europe EEC L1e-L7e homologation.Ngemvume ye-EEC, saqala ishishini lokuthumela ngaphandle ukusuka ngo-2018 phantsi kwesiqubulo esithi: Iimoto ze-Yunlong E-car, Electrify Your Eco Life.
Ikomkhulu lethu ligubungela ummandla ongaphezu kwama-700,000㎡, ineendibano zocweyo ezi-6 ezisemgangathweni ezibandakanya iziko le-R&D elinesimanje kunyeamaziko okuvelisa akrelekrele kwinkqubo enkulu yokuvelisa efana nesitampu, ukuwelda, ukupeyinta, ukuhlanganisana, ukuqinisekisa umgangatho wemveliso kunye nomthamo wonyaka wemveliso yeeseti ezingama-200,000 ngonyaka.Ngeqela elinamava kunye neqela lobuchwephesha, iinjineli ze-R&D ezingama-20, iinjineli ze-Q&A ezili-15, iinjineli zenkonzo ezingama-30 kunye nabasebenzi abangama-200, iimoto zethu zombane zinokufaneleka kwaye zithengiselwe kwihlabathi liphela.Okwangoku, sigxile kwiimoto zabakhweli zombane zokuqhuba umgama omfutshane, ukuhamba kwansuku zonke ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni, kunye neemoto zokuthutha imithwalo yombane kwisisombululo sokugqibela sokusetyenziswa kwezorhwebo, ukuhanjiswa okanye ukuhanjiswa, ukugcina iindleko zabasebenzi kunye nokusetyenziswa kweoli.
Iimoto ze-E-Yunlong ziye zangena ngempumelelo kwiimarike zamazwe ngamazwe ezinomgangatho ophezulu kunye nokusebenza, kunye nenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa, siphumelele indumiso ephezulu evela kubathengi, ivela kumazwe angaphezu kwama-30 kwihlabathi jikelele, njengeJamani, iDenmark, iSweden, EFinland, eFransi, ePoland, eCzech, eNetherlands, eItali, eRashiya, eUkraine, eJapan naseSouth Korea njl.
Kuphononongo lwe-New Technologies, i-New Industries, i-gene yophuhliso ekhethekileyo iye yenziwa ngokuthe ngcembe, ikhawulezisa inguqu esuka kwishishini lemveliso ukuya kwinkonzo yokuvelisa kunye ne-technology innovation enterprise, ekhokelela kwinguqu kunye nokuphuculwa kwamandla amatsha kwishishini lemoto yombane kunye nokutsha kwezobuchwepheshe.
Inkcubeko yoshishino yeYunlong inefuthe elikhulu kwikamva nakuphuhliso lwenkampani.Umbono wethu kukwenza umbane ubomi bakho be-eco, wenze umhlaba we-eco.Umsebenzi wethu kukugcina uphuculo, ukulandela kunye nokuzalisekisa ibango lakho.Iinqobo zethu ezisisiseko yiMfezeko, uTshintsho, iNtsebenziswano.
Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe ngathi, pls uzive ukhululekile ukufota nangaliphi na ixesha.
Umbono: Yomeleza ubomi bakho be-eco, yenza umhlaba we-eco.
Injongo: Qhubeka uphucula, ulandele kwaye uzalisekise imfuno yakho.
Iinqobo ezisemgangathweni:Imfezeko, ukusungula izinto ezintsha, iNtsebenziswano.
I-MIIT yase-China eBhengeza iShishini
Sikuluhlu oluvela kwi-MIIT yaseTshayina, isiqinisekiso sokuyila kunye nokuvelisa iimoto zombane kwaye sinokufumana ubhaliso & nepleyiti yelayisensi
Ubuchule obunamandla be-R&D kunye neQela lobuGcisa elinamava
IiNjineli zeR&D ezingama-20, iiNjineli zeQ&A ezili-15, iiNjineli zeNkonzo ezingama-30 kunye ne-200 yeemplyees
IYurophu ye-EEC L1e- L7e yokuVunywa kweHomologation
Zonke iimoto zethu zombane zifumene imvume ye-EEC COC kumazwe aseYurophu.
IiNtengiso zobuNgcali kunye neNkonzo emva kweNtengiso.
Sibonelela abathengi bethu abaxabisekileyo ngenkonzo yobuchwephesha yokuthengisa kwangaphambili kunye nasemva kokuthengisa.